राजदूत सिंहद्वारा ओहादाको प्रमाणपत्र पेश - प्रवास - कान्तिपुर समाचार
राजदूत सिंहद्वारा ओहादाको प्रमाणपत्र पेश
काठमाडौं — साउदी अरवका लागि नेपाली राजदूत डा.महेन्द्र सिंह राजपुतले साउदीका राजा सलमान विन अब्दुल अजिज अल साउदसमक्ष सोमवार ओहादाको प्रमाणपत्र पेश गरेका छन् ।
सिंहले रियादस्थित दरवारमा ओहादाको प्रमाणपत्र पेश गरेका हुन् । उनी ५ महिनाअघि साउदी गएका थिए । राजा सलमानले नवनियुक्त राजदूत सिंहको सफल कार्यकालको लागि शुभकामना दिएका छन् ।
प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७४ १४:४०
दश वर्षभित्र प्रत्येक नेपालीको वार्षिक आय पाँच हजार डलर : दाहाल
वाम एकताको घोषणा हुँदा कसैले कोकोहोला र रुवाबासी गर्न पर्दैन : ओली
काठमाडौं — मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि एकिकृत भएका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) काे वाम गठबन्धनले आफ्नो संयुक्त चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
'दश वर्षभित्र प्रत्येक नेपालीको वार्षिक आय पाँच हजार डलर'
'आम जनताले छिटोभन्दा छिटो आर्थिक गतिविधिले गति लिन सकोस् र रोजगारीका अवसरमा सिर्जना होस् भन्ने चाहेका छन्। हामीले त्यही भावनालाई अभिव्यक्त गरेका छौँ,' पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
'के झगडा गर्दा लोकतन्त्र सुरक्षित हुन्छ ?'
गठनबन्धनको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष ओलीले घोषणापत्रले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता, शान्ति, स्थायित्व र विकासबारे सुनिश्चिता गरेको दाबी गरे । 'यो चुनावको घोषणापत्र होइन, राष्ट्र निर्माणको प्रतिबद्धता हो । गरिबी निवारण, रोजगारी, स्वच्छ वातावरण र दिगो विकासका लक्ष्यपूर्तिका लागि हामीले प्रत्याभूति गरेका छौँ,' उनले भने ।
लोकतन्त्र कसैले ल्याइदिएको उपहार नभएको बताउँदै उनले भने, 'हाम्रै पुस्ताले बलिदान र संघर्ष गरेर प्रजातन्त्र आएको हो । त्यसैले लोकतन्त्र हाम्रो निष्ठा मात्र होइन, यो उपलब्धि हो । हामीले जनता जगाएको प्रमाण हो । हामी लोकतन्त्रलाई तलमाथि हुन दिँदैनौँ ।'
'पार्टी मिल्दा लोकतन्त्र खतरामा पर्ने भन्न थालिएको छ, के झगडा गर्दा लोकतन्त्र सुरक्षित हुन्छ ?' उनले प्रश्न गरे ।
बम आक्रमणबाट खुट्टा गुमाएकी कटुवाललाई २ लाख सहयोग